Technology | R Blog..!
ကျွန်တော် စမ်းကြည့်သလောက် တွေ့ရတဲ့ bug က
- Chat window ကို ပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်လိုက်ရင် chat conversation တွေ အကုန်ပြန်ပြောက်သွားပါတယ်။- IE မှာ တော်တော်ကို နှေးပါတယ် ( Zhou ကလဲ Firefox or Opera သုံးဖို့ တိုက်တွန်းထားတယ်။) – Call, File Transfer တွေက အလုပ်မလုပ်ပါ။
OpenSource ဖြစ်တဲ့ အတွက် source code ပေးထားပါတယ်။ အသေးစိတ်သိချင်ရင် ဒီမှာ ၀င်ကြည့်လိုက်ပါ။ MSN Live Messenger on Google Talk Client လဲရှိပါတယ်။
Author: Rapster88	Categories: Scripts, Technology	Tags: OS တစ်ခုထဲမှာ OS နောက်တစ်ခု Run လို့ရတဲ့ Microsoft Virtual PC
Microsoft Virtual PC က VMWare လိုပဲ Virtualization နည်းပြညာ ကို အသုံးပြုထားပြီး Windows Operation System တစ်ခုပေါ်မှာ Virutally နည်းအရ နောက်ထပ် OS တစ်ခု ကို Run လို့ရအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Tools တစ်ခုပါ။ Virtual PC က ဘာ အားသာချက်ရှိလဲ ဆိုတော့ OS နှစ်ခုကို တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အရှုပ်အထွေးမရှိ (not affect) မဖြစ်ပဲ တပြိုင်ထဲမှာ သုံးလို့ရတာပါပဲ။ ဥပမာ အနေနဲ့ပြောရရင် – အခု ကျွန်တော်က Windows Vista ပေါ်မှာ IIS7နဲ့ ASP.NET Web Application တွေရေး ပါတယ်။ Ruby On Rails ဆိုတာကိုစမ်းချင်တယ်ဆိုရင် Apache Web Server ကိုတင် ရမယ် နောက်ပြီး MySQL လဲတင်ရမယ် ဒါဆို IIS ဒါမှမဟုတ် Apache မှာ port ကို သွားပြီး ပြောင်းပေးရပါမယ်။ အဲဒီလို မပြောင်းချင်လို့ Virtual PC ကို Microsoft ကနေ Free Download လုပ်ပြီး Windows XP ကို install လုပ်ထားလိုက်တဲ့ အခါ အဆင်ပြေသွားပါတယ်။
နောက်နေ့မှာ Virtual PC နဲ့ Windows XP ဘယ်လို တင်ရလဲ ဆိုတာကို ရေးပြီးတင်ပါမယ်။
Author: Rapster88	Categories: OS, Technology	Tags: Picture တွေထဲမှာ သီချင်းတွေကို ပေါင်းထည့်မယ်..
Posting tweet...Powered by Twitter ToolsSponsors	Spam Blocked	17,652 spam comments blocked byAkismet